I-Loft Apartment esikhungweni esidala sase-Ourense - I-Airbnb
I-Loft Apartment esikhungweni esidala sase-Ourense
Ourense, Galicia, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Imanol
U-Imanol Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle elitholakala eCalle Colón, enhliziyweni yeSikhungo Somlando sase-Ourense, amamitha ambalwa ukusuka kuMeya yasePlaza kanye neFuente de las Burgas. Ithokomele kakhulu futhi inokubukwa okuhle. Ifulethi elilungiswe ngokuphelele, elisendaweni ethulile engxenyeni endala yedolobha. Ngaphandle kwekheshi.
Ifulethi elihle elitholakala eCalle Colón, enhliziyweni yeSifunda Somlando sase-Ourense, amamitha ambalwa ukusuka kuMeya yasePlaza kanye neFuente de las Burgas. Ithokomele kakhulu futhi inokubukwa okuhle.
Kuyifulethi elihle futhi elithokomele lokuklama enhliziyweni yesikhungo somlando sase-Ourense. Amamitha ambalwa ukusuka e-Fuentes de las Burgas (umthombo wemithombo yamanzi ashisayo enikeza idolobha uphawu lwalo) kanye namamitha ambalwa ukusuka ku-Plaza Mayor. Itholakala endaweni enomoya kakhulu wedolobha, igcwele amabha nezindawo zokudlela, kodwa ngesikhathi esifanayo leli fulethi lisemgwaqweni othule kakhulu, okwenza libe yindawo ekahle yokuphumula njengoba kungekho msindo wasebusuku.
Ifulethi lihlome ngokuphelele futhi lilungele ukuhlala isikhashana noma isikhathi eside.
ubusuku obungu-7 e- Ourense
4.84 · 63 okushiwo abanye
Idolobha elidala lase-Ourense ligcwele ngokuphelele izikhungo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezihamba phambili namabha edolobheni akule ndawo kanye nazo zonke izinhlobo zezitolo. I-Cathedral of Ourense kanye nesikwele esikhulu kanye ne-Fuentes de las Burgas (okunamachibi amanzi ashisayo amahhala) akule ndawo.
Ifulethi litholakala eCalle Colón, ekude nendawo yehostela ngakho-ke iyindawo ethule kakhulu kodwa ngesikhathi esifanayo iseduze kakhulu nendawo yemvelo. Lesi sakhiwo siseduze nePlaza de San Marcial
Ezimweni eziningi ngizama ukwamukela izivakashi mathupha ukuze zicacise imininingwane ephathelene nefulethi futhi ngixazulule noma yimiphi imibuzo noma nginikeze ulwazi noma iziphakamiso mayelana nedolobha. Yebo, ngiyafinyeleleka ngesikhathi sokuhlala kwezivakashi zami
Ezimweni eziningi ngizama ukwamukela izivakashi mathupha ukuze zicacise imininingwane ephathelene nefulethi futhi ngixazulule noma yimiphi imibuzo noma nginikeze ulwazi noma izipha…
UImanol Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ourense namaphethelo